Izindaba - Isingeniso Glass Isingeniso
I-Files Glass Ceiling Tile
Ukufakwa kwe-Rock Wool
Ukufakwa kwe-Glass Wool
Isingeniso Glass Isingeniso
Uboya beglasi luhlobo lwefayibha yokufakelwa. Isebenzisa isihlabathi se-quartz, i-limestone, i-dolomite kanye nezinye izinto ezi-ores zemvelo njengezinto zokwenziwa eziyinhloko, ezihlanganiswe nomlotha we-soda, i-borax nezinye izinto ezingamakhemikhali zokuxubha ukuze ziphenduke ingilazi. Esimweni esincibilikisiwe, siphonswa kumicu emihle ecwebezelayo ngokusebenzisa amandla angaphandle nangokushaya. Imicu nemicu yehlukaniswe kathathu ubukhulu futhi ifakwe komunye nomunye, kukhombisa izikhala eziningi ezincane. Izikhala ezinjalo zingabhekwa njengama-pores. Ngakho-ke, uboya bengilazi bungabhekwa njengendwangu ye-porous enezinto ezinhle zokufakelwa komzimba kanye nezakhiwo zokufaka umsindo.
Uboya beglasi be-centrifugal buye bazwakala bunezimpawu ezinhle kakhulu zokufaka i-shock kanye nezimpawu zokufaka umsindo, ikakhulukazi zinomphumela omuhle wokufaka kumvamisa ophansi kanye nemisindo ehlukahlukene yokudlidliza, okuwusizo ukunciphisa ukungcoliswa komsindo nokwenza ngcono indawo yokusebenza.
Uboya bengilazi obuzwakala nge-aluminium foil veneer nayo inamandla okumelana nemisebe yokushisa. Kuyinto efanelekile yokufakelwa umsindo yemisakazo enamazinga okushisa aphezulu, amagumbi okulawula, amakamelo egumbi lomshini, amakamelo ophahla nophahla oluyisicaba.
Uboya bezingilazi obungenamlilo (bungambozwa nge-aluminium foil, njl.) Kunezinzuzo eziningi ezifana ne-fire retardant, non-ushevu, ukumelana nokugqwala, ukuqina kwesibalo esiphansi, ukuhambisa okuncane okushisa, ukuqina kwamakhemikhali, ukumuncwa umswakama ophansi, ukuphindisela okuhle kwamanzi, njll. .
Okuqukethwe okuphansi kweglasi yohlobo lwe-slag yebhola nengilazi elithambile kungawenza kahle umoya futhi kuvikele ukuthi lingageli. Iqeda ukuhanjiswa komoya wokushiswa komoya, kunciphisa kakhulu ukufudumala kokukhiqizwa komkhiqizo, futhi ibone ngokushesha ukuhanjiswa komsindo, ngakho-ke inokufakelwa okuhle kakhulu kokushisa, ukufakwa komsindo kanye nomphumela wokunciphisa umsindo.
Uboya bethu bengilazi bunokuqina okuphezulu kokushisa okuphezulu, ukuqina nokumelana nokushisa okuphezulu kwe-shrinkage. Ingagcina ukuphepha, ukuqina kanye nokusebenza kahle isikhathi eside ngaphakathi kwebanga lokushisa elinconyelwe lokusebenza kanye nezimo ezijwayelekile zokusebenza.
Amanzi-asuselwa ekubhekeni kwento yokwenqaba ukungena kwamanzi Uboya bethu bezingilazi bufinyelela isilinganiso sokubuyiselwa kwamanzi okungaphansi kwama-98%, okwenza kube nokusebenza okuqhubekayo nokuzinzile kokushisa okufudumele.
Alinayo i-asbestos, alikho isikhunta, alikho isisekelo sokukhula kwegciwane, futhi lamukelwa njengomkhiqizo onemvelo yi-National Building Equipment Testing Center.
Isikhathi sokuthumela: Jul-13-2020
Ngibheke ukusebenzisana nawe!ebuza
embonini indawo tangqiaotang zhang jiagang idolobha china
Ukukhiqizwa kuka-2020 kwaqala kabusha